कोरोनाले ल्याएको आर्थिक अस्तव्यस्तता SULSULE:A Truly Nepali News Portal
विश्व अहिले कोरोना भाइरस (कोभिङ—१९) को आतंकले त्रसित छ । कोरोना संक्रमण विश्वभर तीव्ररूपमा सल्किँदै गएको कारणबाट विश्व स्वास्थ्य संगठनले मार्च १३ तारिखमा महामारी नै घोषणा गरेको थियो । रोग फैलिने तीव्रताको कारण नेपाललगायत दक्षिणपूर्वी एसियालाई उच्च जोखिम रहेको घोषणा समेत गरेको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम मानव स्वास्थ्यको साथसाथै आर्थिक क्षेत्र पनि गम्भीर हुँदै गएको छ । कोरोना संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्रमा पहिरो जाने क्रम बढ्दो छ । यस प्रकोपको कारणबाट ठूलै आर्थिक र मानवीय मूल्य चुकाउनु पर्ने देखिन्छ । विश्वको अर्थव्यवस्था धरासायी हुँदै गएको मा सर्वत्र चिन्ता र चासो सार्वजनिक भैराखेका छन् ।
चीन, दक्षिणकोरिया, जापान, अमेरिका तथा युरोपलगायतका औद्योगिक देशहरूमा उद्योगधन्दामा आएको मन्दीका कारण तेलको मूल्यमा ६८ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । विश्वका सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको छ । पर्यटन व्यवसाय धरासायीको अवस्थामा पुग्दै छ । मुलुकहरूमा कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउनको लहर नै चलेको छ । हवाइ यातायात ठप्पको अवस्थामा पुग्दै छ । यात्रु आवगमनको अवस्था घटेको कारणबाट आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउनु स्वभाविकै हो । जसको कारणबाट कैयौं श्रमिकको रोजगारी गुम्दै छ । यसले व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनका लागि खर्च जुटाउन पनि धौधौ पर्ने चुनौती थपिने नै छ ।
आर्थिक गतिविधिमा हुने मन्दीको कारण राज्यको ढुकुटीमा नकारात्मक असर नपर्ने कुरै भएन । यसले विश्व अर्थतन्त्रमा गर्ने क्षति सन् २००३ मा फैलिएको सार्स संक्रमणको क्षतिभन्दा कैयौं गुणा बढी हुने अर्थविदले प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । कोरोनाले अहिलेसम्म विश्व अर्थतन्त्रमा करिब तीन खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी क्षति पुगेको अनुमान एसियाली विकास बैंकले गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि कोरोनाको कारण विश्व आर्थिक वृद्धिदर शून्य पाँच प्रतिशतले खुम्चिएर २ दशममलव ४ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । अझ यो क्रमको तीव्रता आगामी दिनहरूमा अझ बढ्ने आंकलन गरिएको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा अहिलेसम्म महामारीको रूपमा नेदेखिएता पनि आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक संकेतहरू देखिन थालेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको अल्पकालीन र दीर्घकालीन कस्तो असर पर्ला ? सबैको चिन्ता र चिन्तन विषय बन्नु पर्दछ । आउँदो दिनहरूमा यसको नतिजा कस्तो होला ? अध्ययन र अनुसन्धानबाट निकास खोज्न विलम्ब गरिनु हुन्न । विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्र भएका विशाल छिमेकी देशहरू चीन र भारतबाट कोरोना नियन्त्रण तथा अर्थव्यवस्थालाई सुदृढ पार्न आवश्यक सद्भाव र सहयोग जुटाउने कौशल सरकारले देखाउन चुक्नु हुन्न । नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन शून्य दशमलव शून्य चार प्रतिशत अर्थात १२ दशमलव १२ मिलियन अमेरिकी डलरमा खुम्चिने आंकलन गरेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः पर्यटन उद्योग र वैदेशिक रोजगारले धानेको छ । यी दुवै क्षेत्र कोरोना संक्रमणले धराशायी हुँदै गएको जगजाहेर नै छ । अन्य देशहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार र निर्भर रहने यी दुवै क्षेत्र अस्थिर र जोखिमपूर्ण मानिन्छन् । नेपालको पर्यटन र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कोरोनाको निर्मम प्रभाव पर्दै गएको छ । पर्यटन मन्दीको असर नाङ्ले पसलेदेखि, ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोर, चिया पसलदेखि पाँचतारे होटल, ट्याक्सी चालकदेखि विस्तारै नकारात्मक असर पार्दै छ । अझ यसको गम्भीर असर क्रमशः बढ्दै जाने निश्चित नै छ ।
विश्वभरि नै पर्यटन क्षेत्र कोरोनाको चपेटामा नराम्रोसँग थल्लिएको छ । कोरोना संक्रमणको गति हेर्दा पर्यटन व्यवसाय तंग्रिन लामै समय लाग्ने निश्चत छ । विश्वभर चलेको लकडाउनको निरन्तरताले आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकको आवगमनका प्राय ठप्प छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्रयाउने सपना पनि अधुरै रहयो । पर्यटन उद्योगसँग सम्बन्धित व्यवसाय होटल रेस्टुराँ, यातायात, टूर गाइड आदिमा मन्दी आउने तीव्रता बढ्दै छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू विश्वभर रद्द तथा स्थगित हुँदै छन् । देशको अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण टेवा पु-याउँदै आएको वैदेशिक रोजगारीमा पनि कटौती वा बन्द नै भैराखेको छ । कतिपय रोजगारदाता देशहरूले कामदारको संख्या कटौती या धमाधम फिर्ता पठाउँदै गरेका छन् । यसरी रोजगारी गुमाउनेमा पर्यटन उद्योग र वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरू नै पहिलो निसानामा परेका छन् । वैदेशिक रोजगारबाट आएको पैसामा सहर बजारमा बसाइ सरेका कतिपय परिवारको बिचल्ली नै नहोला भन्न सकिन्न ।
कोरोना भाइरसको जोखिममा सबभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत जनसमुदायलाई पर्ने टड्कारो देखिन्छ । यस वर्गमा रहेका जनसमुदायमा पर्याप्त स्वास्थ्य जनचेतनाको अभाव मात्र नभएर आर्थिकरूपमा पनि कमजोर भएकाले संक्रमणबाट जोगिन आवश्यक सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्दैनन् । सुरक्षित पेसाको अभावमा दिनभरि कमाएर बिहान बेलुकाको छाक टार्ने श्रमिकको लागि यो महामारीले सबभन्दा बढी ग्रसित पारेको छ र पार्ने छ । सरकारले यस्ता विपन्न र निमुखा जनसमुदायको पहिचान गरी सरकारले राहतको सुविधा प्रदान गर्ने नीति लिनु लोककल्याणकारी राज्यको प्रमुख दायित्व हो । अन्यथा रोजिरोटीको गर्जो टार्न यो वा त्यो ठाउँमा भौतारिन विवस यो वर्ग नै जान अन्जानमा भाइरस फैलाउने प्रमुख एजेन्ट नबन्लान भन्न सकिन्न ।
पिछडिएका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अधिकांशको दिगो र सुरक्षित रोजगारी नभएका मानिसको स्वस्थ एवम् स्वच्छ गाँस, बास र कपासको न्यूनतम व्यवस्था गर्न सकेदेखि कोरोना संक्रमण फैलिन केही हदसम्म रोक्न टेवा पुग्नेतर्फ हेक्का राख्न बिर्सनु भूल हुन सक्छ । राज्यले अभिभावकत्व लिएको महसुस सबै जनताले गर्न पाउने परिस्थिति सिर्जना गर्न सरकार चुक्नु हुन्न ।
कोरोेना भाइरसको महामारीले ल्याएको विषम परिस्थितिसँग सावधानीपूर्वक जुध्नुको विकल्प हाम्रोसामु छैन् । आत्तिनुभन्दा पनि संयमतापूर्वक सामना गर्दै अन्य देशहरूबाट पाठ सिकेर कोरोना प्रतिरोधका आक्रमक रणनीति बनाउनु बुद्धिमानी ठहर्छ । साथसाथै देश आत्मनिर्भर बन्ने उपाय र क्षेत्रहरू प्हिचान गरेर विदेशिएका युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै पसिना बगाउने अवसर खोजिनु पर्दछ । नेपाल कृषिप्रधान देश भनियता पनि अहिले घट्दै गएर ६५ प्रतिशत जनसंख्या मात्र कृषिमा निर्भर छन् । त्यस्तै उद्योग धन्दाहरू धमाधम बन्द भएका छन् ।
सूचना र प्रविधिसँग सरोकार राख्ने पेशा व्यवसाय त्यति फस्टाएका छैनन् । रोजगार सिर्जना गर्ने खालका व्यवसायहरू सञ्चालनमा स्पष्ट र दिगो नीति नभएको सरोकार पक्षको गुनासाको रांैचिरा विश्लेषणबाट निष्कर्षमा पुग्न विलम्ब गरिनु हुन्न । जनता र सरकारको परस्पर सहकार्य भरपर्दो भएमा पक्कै पनि कोरोना आक्रमणलाई निस्तेज पार्न सकिने चीनको सफलताबाट हामीले पनि सिक्नु पर्दछ । (आर्थिक दैनिकबाट)